Ny akanjo mahazatra any Italia dia manome aingam-panahy tsara tarehy | Vaovao momba ny dia
Akanjo mahazatra any Italia
ny fitafiana mahazatra an'ny firenena tsirairay Izy ireo dia voafidy mifototra amin'ny fomban-drazana, ny tantara ary ny vanim-potoana kanton'ny toerana tsirairay. Ireo akanjo ireo dia ao anatin'ny kolontsain'ny firenena tsirairay ary na dia tsy ampiasaina ankehitriny aza izy ireo dia mbola marika ho an'ny mponina rehetra ao amin'ny firenena. Simbolo izay avoakan'izy ireo amin'ny fotoana manokana toy ny fialantsasatra manandanja.
Italia dia firenena tsara tarehy ary tena lehibe izy io, koa mety misy ny fandikana hafa ny akanjo mahazatra an'i Italia. Ny fomba amam-panao sy ny fitafiana dia miova avy any avaratra ka hatrany atsimo, ka ezahinay hazavaina kely ity karazana akanjo ity izay toa mahazatra an'i Italia.
1 Fampiasana akanjo mahazatra
2 Akanjo mahazatra an'i Italia
3 Ny Renaissance any Italia
4 Romana lasa
5 Akanjo sardinia
6 Karnavaly Venice
Fampiasana akanjo mahazatra
Ireo fitafiana mahazatra dia avy amin'ny fahatsiarovana taloha ny fotoana niainan'ny firenena vanim-boninahitra iray. Afaka ireto akanjo ireto manana ny fitaomana isan-karazany ary raha ny marina, ny italiana italiana dia mitazona fitoviana vitsivitsy amin'ny Alemanina. Ireo dia fitafiana izay matetika entanin'ny aingam-panahy amin'ny vanim-potoana antonony na amin'ny fotoana tsy nisy fitaomana manerantany amin'ny lamaody, noho izany dia nitombina kokoa ny zava-drehetra. Mikasika ny fampiasana ireo akanjo ireo dia mazàna dia avoaka amin'ny fety misy tombotsoam-paritra na firenena. Fotoana kely anaovan'ny faritra tsirairay ny fankalazana izay mankalaza ny kolontsaina sy ny fomba amam-panaony, noho izany dia tena zava-dehibe tokoa ny akanjo toy ny ampahany iray amin'ny fetibe.
Akanjo mahazatra an'i Italia
Ny akanjo izay azo raisina ho mahazatra an'i Italia dia misy a zipo miaraka amin'ny petticoat sy apron. Akanjo mitafy ity izay misy akanjo sy akanjo fotsy eo amboniny. Ankoatr'izay, ny volon-doha na sarona amin'ny volo dia tena fahita amin'ny fankalazana italiana, tsy tokony hohadinointsika ny maha-zava-dehibe ny finoana katolika eto amin'ity firenena ity. Androany ianao dia afaka mahita akanjo maro mitovy amin'izany, aingam-panahy tamin'ny vanim-potoana antenantenany, na dia eo amin'ny resaka akanjo mahazatra aza dia misy faritra mampiseho akanjo tena samy hafa sy manokana.
Ny Renaissance any Italia
Iray amin'ireo fotoana hajaina indrindra amin'ny Italia no Renaissance, rehefa nisy fotoana famirapiratana. Ho fanampin'izany, ny akanjo sy ny fitoriana amin'ity vanim-potoana ity dia manana kalitaon'ny tena tsara tarehy sy be pitsiny. Ny palitao izay entanin'ny aingam-panahy amin'ity indray mitoraka ity dia matetika lafo, satria miresaka dantelina sy mpivaro-boho isika mba hanaovana akanjo misy sosona sy pitsopitsony maro. Ireo akanjo ireo dia matetika ampiasaina amin'ny fety natokana ho an'ny Moyen Âge sy hiaina ny vanim-potoana taloha. Izy ireo koa dia be mpampiasa amin'ny fankalazana ny Fetibe, indrindra any Venise.
Fantatry ny rehetra ny vanim-potoana romana sy ny hatsarany fitoriana vita amin'ny lamba fotsy. Izy ireo dia akanjo izay efa tafiditra ao anatin'ny kolotsaina malaza ary efa namboarin'ny tsirairay ho fitafiana romana mahazatra, saingy tsy tokony hohadinointsika fa anisan'ny kolontsaina sy ny tantaran'i Italia ihany koa izy ireo. Ka izy ireo dia azo raisina ho toy ny akanjo mahazatra hafa nentanin'ny Romanina.
Ao amin'ny nosy Sardinia dia manana antsipiriany ara-kolotsaina miavaka izy ireo ary amin'ny akanjo dia hitantsika ny iray amin'izy ireo. Ireo akanjo ireo dia vita amin'ny lamba lava sy malalaka izay misy sosona maromaro. Headdresses sy voaly dia ampiasaina amin'ny lohany miaraka amin'ny lamba matevina sy dantelina, amin'ny sosona maromaro ihany koa. Mahazatra ny mahita lamba amboradara volamena ary misy alokaloka toy ny mena na maintso. Raha ho azy ireo, ny lobaka fotsy misy fehiloha misy akanjo lava dia mahazatra.
Zava-dehibe indrindra amin'ny lafiny fitafiana mahazatra dia ny Carnival any Venise, izay malaza manerantany. Amin'ity tranga ity, aingam-panahy izy ireo amin'ny fitafiana kanto Renaissance izay tsy ahaizan'izy ireo rehefa miresaka lamba sy antsipirihany mihaja. Brocades, landy ary satin dia ao anatin'ireo akanjo tsara tarehy ireo. Ny zipo dia manana habetsahana sy petticoat betsaka. Eo an-tampon'ny vatany manamboatra mba hampisehoana ny andilana. Ny akanjo dia azo haingoina amin'ny antsipiriany isan-karazany, manomboka amin'ny dantelina ka hatramin'ny volom-borona. Raha resaka Carnival dia tsy misy fitsipiky ny akanjo harahina fatratra, ny aingam-panahin'ny Renaissance ihany no manenika ny zava-drehetra. Any an-tampony dia azo atao ny mahita voaly na satroka malalaka. Fa raha misy zavatra tokony miaraka amin'ireo akanjo ireo, dia ny sarontava karnavaly Venetiana, izay efa nalaza manerantany. Ireo sarontava ireo dia mifanentana amin'ilay akanjo foana amin'ny volony ary matetika no haingoina amin'ny famirapiratana, loko miloko ary antsipiriany hafa izay manome lafo kokoa ny akanjo manontolo. Miaraka amin'ireo akanjo ireo dia azonao atao koa ny mahita kojakoja vitsivitsy, toy ny mpankafy feno vakana sy volom-borona na fonon-tànana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Akanjo mahazatra any Italia
Inona no ho hita any Los Angeles
Cala Turqueta, zoro tsara tarehy any Menorca